မြန်မာပြည်တွင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 330
ဗြိတိသျှ ဒုတိယမြောက် အယ်လစ်ဇဘက် ဘုရင်မကြီး သန်းဝင်းလှိုင် ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ဗြိတိသျှထီးနန်းကို ယနေ့တိုင် စိုးစံလျက်ရှိသော ဧကရီဘုရင်မကြီးမှာ ဒုတိယမြောက် အယ်လစ်ဇဘက် ဘုရင်မဖြစ်သည်။ ခမည်းတော် ဆဋ္ဌမမြောက် ဂျော့ဘုရင် သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် နတ်ပြည်စံခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိသျှထီးနန်းကို ဆက်ခံခဲ့သော သူဖြစ်သည်။ သို့သော် နန်းသိမ်းပွဲ ရာဇဘိသေကကို ခမည်းတော် နတ်ပြည်စံလွန်ပြီး ၁ နှစ်အကြာ ၁၉၅၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယမြောက် အယ်လစ်ဇဘက်ဘုရင်မကြီးသည် ခမည်းတော် ဆဋ္ဌမမြောက် ဂျော့ဘုရင် (King George VI) နှင့် မယ်တော် အယ်လစ်ဇဘက် မိဘုရား (Elizabeth...
ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၌ မကြာမီတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည့် သင်တန်းရပ်များအား အများပြည်သူလူထုတို့အနေဖြင့် စိတ်ဝင်စား၍ သော်၎င်း၊ ဗဟုသုတအနေဖြင့်သော်၎င်း၊ ပညာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် သော်၎င်း၊ လူသားများနှင့် ကင်းကွာ၍မရနိုင်သော လူသားအကျိုးပြု ပညာရပ်များအား အောက်ပါနေ့ရက်၊ အချိန်များတွင် လာရောက်၍ လေ့လာသင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း အထူးသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ● ပျော်ရွှင်စာသင်ကျောင်းဖွင့်နည်း ဒေါ်ယမင်းဇော် (Diploma of Children’s Service Australia) မှ သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်သည်။ နေ့ရက် – ၂၈.၁၂.၂ဝ၁၂ (သောကြာနေ့) အချိန် – ညနေ (၃းဝဝ) နာရီမှ (၅းဝဝ) နာရီအထိ ရည်ရွယ်ချက် – (က) မိမိနေအိမ်မှနေ၍ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေရှာနိုင်ရန်။ (ခ) အခြေခံပညာတတ်ရုံမျှဖြင့် အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်မလို...
လူတိုင်းသိသင့်သော First-Aid ပညာရပ်
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ၁၅.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် (၉းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် (First-Aid Course) ဟူသော ဒဏ်ရာရသော လူနာတစ်ဦးအား အရေးပေါ်အသက်ကယ်နိုင်သော (အရေးပေါ် သူနာပြုစုခြင်းသင်တန်း) အားပို့ချခဲ့ပါသည်။ ယင်းသင်တန်းအား Australia နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဆရာဝန်ကြီးများမှ လာရောက်၍ သင်ကြားပို့ချခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ အသင်းသူ/သားများ၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပြည်)၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး)၊ သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ကြို့ပင်ကောက်)တို့မှ လူမှုရေးသမားများ၊ Hundred Power ဆေးခန်း(ပဲနွယ်ကုန်း) နှင့် ထိန်လင်းဆေးခန်း (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း) တို့မှ လူမှုရေးသမားများ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယင်းသင်တန်းတွင် လူတစ်ယောက်၏အသက်အား ကယ်တင်ရန်လိုအပ်သော (CPR) နည်းဖြင့် လဲနေသောလူနာအား အသက်ကယ်ရန်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ မုံရွာမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲမှုကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာ များရရှိခဲ့သော သံဃာတော်အပေါင်းနှင့် ပြည်သူတို့အား ဆေးဝါးကုသရန်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ အလှူငွေကျပ် ၉၅၅ဝဝဝဝိ/- (ကိုးဆယ့်ငါးသိန်းငါးသောင်း) ကျပ်တိတိ အား မန္တလေးမြို့သို့ (၁၁.၁၂.၂ဝ၁၂) ရက်နေ့၌ ပို့ဆောင်လှူဒါန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်၏ ညီမဝမ်းကွဲဖြစ်သူ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများအား ကြိုးစားပေးဆပ်နေသော မန္တလေးမြို့နေ မသင်းနွဲ့နွဲ့ဖေထံသို့ ၁၁.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် (၂းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ဘဏ်ငွေလွှဲစနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ မန္တလေးမြို့ရှိ မသင်းနွဲ့နွဲ့ဖေ သည် မန္တလေးမြို့ရှိဆေးရုံများဖြစ်သော မန္တလေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့် ကန်တော်နဒီဆေးရုံကြီးများသို့ သွား...
အနစ်နာခံသူ နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူ ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ (၂.၁၀.၂၀၁၂)နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လောစ်အိန်ဂျလိမြို့က ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ(LACC)မှာ မြန်မာ မိသားစု များနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဟောပြော မေးဖြေပွဲလုပ်တော့ မိမိလည်း အခြား သံဃာတော် (၁၅)ပါးတို့နဲ့ အတူ ရောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ မေးခွန်းရှင်တစ်ဦးက “ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ အစောပိုင်းကတည်းက အနစ်နာခံခဲ့ကြသူတွေဟာ ဒီနေ့အချိန်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စတဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်မရကြဘဲ ကြားဖြတ်ကာလရောက်မှ ပါဝင်လာ ကြသူတွေက နေရာ ရနေ သလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ အမေစုရဲ့ သဘောထားကို ရှင်းပြပေးပါ” ဆိုပြီး စာရေး မေးမြန်းပါတယ်။ ဒေါ်စုရဲ့အဖြေကတော့ “ပြည်သူ့အတွက် ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ စွမ်းနိုင်ရာက ပါဝင်ကြတာဟာ...
ကာတွန်း ဘီရုမာ – ဒို့က အသန့်ကြိုက်တော့ အပြောင်ပဲ
ကာတွန်း ဘီရုမာ – ဒို့က အသန့်ကြိုက်တော့ အပြောင်ပဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ● စက္ခုအလင်းတံခါး ဖွင့်ထားလေပြီ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှစတင်၍ “လူ ၂၅ဝဝ ရရင် ဗမာတွေအလင်းပွင့်ပြီ” ဟူသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ကျွန်တော်၏ Face Book စာမျက်နှာတွင် တင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ၄င်းဆောင်းပါးသည် အမြင်အာရုံ စူးရှထက်မြတ်စေရန်၊ အမြင်အာရုံများ ကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်၊ အမြင်အာရုံများ အေးမြ တောက်ပလာစေရန်နှင့် စက္ခုအလင်းမှုံဝါးခြင်း၊ တိမ်စွဲခြင်းတို့ကို ခံစားနေရသော မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ “သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း”တွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ မျက်စိခွဲစိတ်ခန်းဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် “သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်း”သို့ လာရောက်ကုသကြသည့် မျက်စိဝေဒနာရှင်များသည် ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ရမည့် လမ်း စရိတ်၊ စားစရိတ်နှင့် မိမိမျက်စိအား ခွဲစိတ်ကုသရန်...
ကာတွန်း ဘီရုမာ – လွန်တာရှိ ၀န်တာ “မီး” ပါဘုရား
ကာတွန်း ဘီရုမာ – လွန်တာရှိ ၀န်တာ “မီး” ပါဘုရား ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
“ခေါင်းကောင်းရင် ကိုယ်မရွေ့” (ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဂုဏ်ရည်) ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)၊ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ လောကထဲမှာတော့ “ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့ဘူး”လို့ မှတ်ချက်ဆိုရိုးစကား ရှိတယ်။ သာသနာတော်မှာ တော့ အဲဒီ ဆိုရိုးစကားကို ဆန့်ကျင်ပြောင်းပြန်ပြုရလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ လောကနဲ့ သာသနာဆိုတာကလဲ အခြေခံတရားချင်းရော ဦးတည်ချက်ချင်းရော ဖြောင့်ဖြောင့်ဆန့်ကျင် ကြတာဆိုတော့ တချို့ဖြစ်ရပ်တွေကလည်း ဖြောင့်ဖြောင့် ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်တွေ ဆန့်ကျင်တော့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေ အပေါ်မှာ ကောက်ချက်ချတဲ့ ဆိုရိုးစကားတွေလည်း ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်တာဟာ ဓမ္မတာပဲပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ လောကဆိုတာက လောဘကို အရင်းတည်ပြီး သံသရာကို ရေစုန်လိုက်နေကြတာ မဟုတ်လား။ သာသနာ ဆိုတာကတော့ “ပဋိသောတဂါမိံ = ရေဆန်ကို ဦးတည်တယ်”လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် မိန့်ကြားခဲ့သလိုပဲ၊...
နှစ်(၉၂) နှစ် ပြည့် အမျိုးသားနေ့ သန်းဝင်းလှိုင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ ယခုနှစ် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ရက် (၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ရက်) စနေနေ့သည် ၉၂ နှစ်ပြည့် အမျိုးသားနေ့ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်သူနယ်ချဲ့အစိုးရကို ပထမဆုံး ထိထိရောက်ရောက် တော်လှန်ဆန္ဒပြခဲ့သောနေ့ကို နောင် မျိုးဆက်သစ်များ အမှတ်တရရှိစေရန်အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့ကို အမျိုးသားနေ့အဖြစ် နှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ ၉၂ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့ကို အမျိုးသားနေ့ဟူ၍ သတ်မှတ်ရခြင်းကား ဗြိတိသျှပညာမင်းကြီး မတ်ဟန်းတား၏ ယူနီဗာစီတီအက်ဥပဒေအရ ဖွင့်လှစ်မည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၈၂...
Page 330 of 349«1...328329330331332...349»
နောင်ကျော် - သမုဒယလမ်းခွဲမှာ